Mpanamboatra sy mpamatsy fitaovana SPD fiarovana
Indostria simika sy pharmaceutika
LED jiro SPD
Fitaovana fiarovana an'ny Surge izahay Mpanamboatra tany am-boalohany miaraka amin'ny marika misy azy ary manome ihany koa OEM ary ODM tolotra.
Izahay dia mitazona ny fahaiza-manao sy ny fanoloran-tena - ho tombontsoan'ny mpanjifantsika, mpiara-miasa ary mpiasa.
Fiarovana miaro ny Surge (SPD) Arovy ny fanananao
Raha liana ianao mba ho solontenanay eo amin'ny tsenanao, dia ho backup mafy orina izahay.
Manome fanampiana ara-teknika avo lenta izahay amin'ny alàlan'ny vondrona teknisiana. Ny fanampiana dia azo antoka amin'ny alàlan'ny kaonferansa an-tariby, mailaka na Whatsapp ary ho fanampin'izany, ny mpiasan'ny teknika anay dia manao fanaraha-maso ireo zavamaniry erak'izao tontolo izao izay tokony harovana ary manome ny habeny amin'ny rafitra SPD ary avy eo ny torolàlana fametrahana sy fivoriambe tsara indrindra. Ny ekipan'ny injeniera dia mikarakara fotoam-panofanana natokana ho an'ny hery mpivarotra sy ho an'ny mpanjifa mivantana.
Ny mpanjifa dia afaka miantehitra amin'ny fanohanana ara-teknika azo antoka ho an'ny manontolo, ny marina ary ny fanajana tanteraka ny zavatra ilainy. Ny orinasanay dia manatanteraka ny fandrefesana sy ny famolavolana ny rafitra, miaraka amin'ny mpamorona sy ny injeniera, indrindra ireo sarotra, ary manome fanohanana ara-teknika sy ara-barotra.
LSP dia orinasa miorina amin'ny fivoaran'ny teknolojia, mitady fahombiazana hatrany ary ambonin'ny kalitao rehetra.
Ny ekipanay dia noforonin'ny mpiasa mahay sy za-draharaha, manandrana manao dingana hatrany hatrany amin'ny fanavaozana izahay.
Ahoana no hikarakaran'ny LSP ny baikonao
1. Raiso ny hevitra na santionany voalohany aminao
A. Mandefa ny hevitrao momba ny famolavolana na ny sary CAD ianao, dia hamorona sary CDR maimaim-poana ho anao izahay.
B. Mividy sary sary CDR amin'ny orinasa mpamorona ianao ary mandefa izany aty aminay, manamboatra santionany SPD izahay araka ny sarinao CDR.
C. Alefaso aminay ny santionan'ny vokatrao, mamorona endrika mitovy amin'ny santionanao amin'ny baiko OEM izahay.
D. Safidio ny laharanay efa misy, manana endrika SPD maro izahay - raha tianao ny volavolainay, safidio fotsiny avy eo amin'ny galerianay na mifandraisa aminay mba hahitana hevitra bebe kokoa.
2.100% Fanaraha-maso isaky ny ampahany aorian'ny fivoriambe
Hizaha toetra ny zava-bitan'ny SPD tsirairay izahay mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takinao izany.
3. Sampan-draharahan'ny fivoriambe matihanina
Ny fanangonana ireo singa sy kojakoja rehetra ao anaty vokatra vita dia tanterahin'ireo mpiasa matihanina ary tompon'andraikitra mpanara-maso mahay no tompon'andraikitra amin'ny fankatoavana ny vokatra farany.
4. ekipa QC an-tserasera matihanina
Raha ny fepetra takiana amin'ny famokarana, ny fisehoan'ny vokatra sy ny fiasa rehetra dia tsy maintsy mandalo fitsirihana an-tserasera 100% amin'ny alàlan'ny QC manam-pahaizana mandritra ny fizotry ny fivoriambe.
5.Mafapo ny takiana amin'ny fonosana rehetra
Aorian'ny fanaraha-maso ny vokatra dia hamonosana entana mifanaraka amin'ny zavatra takinao rehetra izahay. Loko amin'ny boaty, blister roa na pallet. Handefa sary antsipiriany momba ny fizotran'ny fonosana ihany koa izahay.
6.Safe sy amin'ny fandefasana fotoana
Ny fanomanana ny fandefasana entana tsirairay dia tanterahina amin'ny fanaraha-maso akaiky. Hanolotra ny sary isaky ny dingana izahay, ao anatin'izany ny sarin'ilay kaontenera azo antoka. Noho ny torolàlana henjana sy ny fanaraha-maso akaiky amin'ny fotoana rehetra dia afaka manafoana ny lesoka izahay amin'ny fametrahana ny entanao.
7. Hahazo sary sy antontan-taratasy rehetra ianao
Hanome anao ny sary rehetra izahay, ary ny ekipan'ny mpitatitra entana efa za-draharaha dia handefa anao ny antontan-taratasy rehetra rehefa vita ny entana.
Nifidy izahay LSP satria izy ireo dia tena azo atokisana hatramin'ny andro voalohany. Manana mpiasa matihanina sy voaofana tanteraka izy ireo izay manampy anay hanaraka ny baikonay ary faly foana manome sary antsipiriany momba ny vokatra na ny fizotry ny famokarana tsirairay - izay ahafahantsika manara-maso ny dingana tsirairay amin'ny fizotran'ny baiko. Ny vokatra rehetra dia aterina ao anatin'ny fe-potoana nifanarahana fa ilaina amin'ny orinay.
Shelly Sis, Frantsa
Mahita fifampiraharahana aho LSP tena mahafa-po, miaraka amin'ny fizotran'ny lamina mandroso sy ny haitao tena tsara ampiasaina amin'ny fanamboarana vokatra. Azo antoka fa manam-pahaizana amin'ny sehatra misy azy ireo izy ireo ary mpiara-miasa matanjaka amin'ny orinasantsika.
Anna Ventura, ESPAINA
LSP dia manamboatra ny fitaovana SPD Surge Protection anay hatramin'ny taona 2012. Ny vokatra rehetra dia manana kalitao miavaka ary nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifanay. Misaotra!
Erice Herman, SILIA
Raha manana fanontaniana ianao dia eto ho anao ny fanohanan'ny mpanjifa valiny haingana.
Fitaovana fiarovana ny tariby fanamafisam-peo
Fitaovana fiarovana amin'ny alàlan'ny tariby signal Dehn - Rafitra IT DIN Rail nitaingina SPD [...]
Polisy roa azo alefa amina poloney Type 3 T3 DR M 2P IL = 25A
Pollable roa-poleta Type 3 T3 surge arrester DR M 2P IL = 25A DEHNrail modular Pole roa [...]
Fiarovana amin'ny alàlan'ny avo lenta ho an'ny tranokala 5G (tobin'ny finday)
Fiarovana amin'ny haavon'ny toerana misy ny sela 5G (tobin'ny finday) Fiarovana ny famatsiana herinaratra Ialao [...]
Fiarovana amin'ny tselatra
Ampio: 5th FL, No. 666 Yaming Road, Xiangyang Industrial Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Telefaona finday: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
Mailaka: varotra [@] lsp-international.com
© Copyright 2010-2022 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Zo rehetra voatokana. | politika fiarovana fiainan'olona | Fepetra |
Mampiasa cookies izahay hahazoana antoka fa hahazo ny traikefa tsara indrindra amin'ny tranokalanay. Azoko!No
Hofoanana ny cookies